Ivesi 1: Kuyinto engqondweni yami ukwenza ozithole isikhashana? Soapbox swag, Ngisanda phezu kwalo kwaba ngo kwalezi zibopho futhi ngikhathele kwalo (nomsindo Car) I know...
Intro: (Natalie) Ngiyabona ukubukela Ingabe uyakuthanda lokho okubonayo? Am I angashadile? Well, sorta Kinda mhlawumbe Wenzani wena wayecabanga? Your face looks familiar I see you all...
Ivesi 1: Boy I hopped out the grave good morning I been sleeping for too long I’m yawning Everybody talking trying to see me, ukungakholwa Like yena ukuphefumula kanjani? He was six feet...
Intro / isampula: Yima, yima Ngicela esinye (Phinda 4x) Ivesi: Boy niyazi ngiwafaka J sika, rock them on izinyawo zami bethathwe craze, my closet ain’t...
Intro: Oh, Ngiyakuthanda, yeah Like ayikho enye, yeah Lapho ngibona wena smile wena kukhanye like nje ehlobo, yeah Ivesi 1: You know that feeling when them words fail It’s...